Blog – Page2– New Dream Media Ministry Inc
New Dream Radio Live
Every one hasachance to dream. Every one needs to dreamafresh new dream. So that our dreams come true.
အချိန်ကာလစေ့သောအခါ၊ ငါတို့သည် သား၏အခွင့်အရာကို ခံရမည့်အကြောင်း ပညတ်တရားလက်၌ရှိသော ငါတို့ကို ရွေးနှုတ်စေခြင်း ငှါ၊ မိန်းမဝမ်း၌ ပဋိသန္ဓေယူ၍၊ ပညတ်တရားအောက်၌ ဘွားမြင်ရသော သားတော်ကို ဘုရားသခင်သည် စေလွှတ်တော်မူ၏။ ဂလာတိ ၄း၄-၅ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အတော်ကြာတုန်းက၊ နွေရာသီရက်တစ်ရက်မှာ စတိုးဆိုင်တစ်ခုမှာ ကျွန်တော့်မိန်းမ ဈေးဝယ်ခြမ်းနေပါတယ်။ ကျွန်တော် ကတော့ ကျွန်တော့်ဇနီးထွက်လာတာကို ကားပေါ်ကနေ စောင့်နေခဲ့ ပါတယ်။ ကျွန်တော့်သမီးအယ်မီကတော့ သုံးနှစ်အရွယ်ပဲရှိသေးတော့၊ ကားနောက်က ကလေးထိုင်ခုံမှာ ထိုင်နေရပါတယ်။ သူရဲ့ လှောင်ပိတ် မွန်းကြပ်တဲ့ခုံမှာ ပူအိုက်လွန်းတော့ သမီးအယ်မီက ခေါင်းကို ပြတင်းမှ ပြူထွက်ပြီး ”ကိုယ်တော်၊ ဒီဘဝ၊ ဒီမွန်းကြပ်တဲ့အခန်းထဲမှ မြန်မြန် ထွက်ခွင့်ပြုပါ” လို့အော်နေပါတယ်။ ကယ်တင်ရှင်တစ်ဦး တောင့်တနေ တာပါ။ ကျွန်တော့်သမီးက သူ့ကိုယ်သူကယ်တင်၊ လွတ်မြောက်နိုင်စွမ်း…
ခရစ်တော်အဖို့ မွေးနေ့ပါတီ ကျင်းပခြင်းဖြင့် ခရစ်စမတ်ကြိုဆို ဆင်နွဲခြင်း
မကြာသေးခင်တုန်းက ကျွန်တော့်အစ်မဖြစ်သူက ကျွန်တော် ငယ်ငယ်တုန်းက ဓါတ်ပုံတစ်ပုံ တွေ့လိုက်ပါတယ်။ သုံးနှစ်သားအရွယ် ကျွန်တော်က၊ ခရစ်တော်ရဲ့မွေးနေ့ကိတ်နားမှာ မတ်တပ်ရပ်လို့၊ ဖယောင်း တိုင်အစုံနှင့်၊ အဲဒီမွေးနေ့ကိတ်က ကျွန်တော့်ရဲ့စိတ်ကူးပါ။ အဲဒီတုန်းက ကျွန်တော်ဟာ မြီးကောင်ပေါက်ကလေးလေးဆိုတော့ အမေ့ကိုမေးခွန်း မေးလိုက်တယ်။ ”မေမေ၊ သားတို့ ဘာကြောင့် ခရစ်စမတ်ပွဲကျင်းပတာလဲ” အမေက စိတ်ရှည်ရှည်နှင့် ရှင်းပြပါတယ်။ ”ခရစ်စမတ်နေ့ဟာ ခရစ်တော် ရဲ့ မွေးနေ့မို့လို့ မွေးနေ့ပွဲကျင်းပတာ” တဲ့။ မူကြိုရွယ်ကလေးတစ်ယောက်ပီပီ၊ ကျွန်တော်ပြောထွက်တာ ကတော့ ”ဒါဆို ကျွန်တော်တို့ ခရစ်စမတ်ပွဲကျင်းပသင့်တာပေါ့။ ကိတ်မုန့် နှင့် ခရစ်စမတ်သီချင်းကို ခရစ်တော်အတွက် သီဆိုသင့်တယ်” လို့ပြောလိုက် မိတာ။ အမေက ”ဟုတ်တာပေါ့ လုပ်ကြရအောင်” လို့ပြောလိုက်တယ်။ ဒီလိုနှင့် ကျွန်တော်တို့ဝါရင့်မိသားစုမှာ ခရစ်စမတ်အစဉ်အလာ တစ်ခု ခရစ်တော်မွေးနေ့ပွဲကျင်းပလာတာ…
ဘုရားသခင်ဟာ သင်နှင့်အတူရှိနေသောကြောင့် ခရစ္စမတ်ပွဲတော် ဆင်နွှဲသင့်တယ်
ဒီစာအုပ်ရှေ့ပိုင်းမှာ ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပါပဲ၊ လူတော်တော် များများက ခရစ်စမတ်ချိန်ခါမှာ အထီးကျန်မှုတွေခံစားကြပါတယ်။ စာဖတ် သူကိုယ်တိုင်၊ ဒီအချိန်မှာ ဘုရားသခင်က ခင်ဗျားနှင့်အတူရှိမနေဘူးလို့ ခံစားကောင်းခံစားနေမှာပါ။ ဒါပေမယ့် အဲသလိုခင်ဗျားခံစားတဲ့အပေါ် ခင်ဗျားဘဝမှာ ဘုရားသခင်အတူရှိနေခြင်း၊ မရှိခြင်းနှင့် တိုက်ရိုက်မသက် ဆိုင်ပါ။ ခင်ဗျားရဲ့စိတ်ခံစားမှုဆိုတာာ ခင်ဗျားကို လွမ်းမိုးတဲ့အရာတွေ အပေါ်မူတည်ပြီး ရှိတတ်ပါတယ်။ ဒီတော့ခံစားချက်တွေဆိုတာ တရားသေ ယုံကြည်စိတ်ချလို့မရနိုင်ပါ။ တခါတလေ စာဖတ်သူဘဝမှာ “မင်းခံစား သလိုလုပ်ပစ်လိုက်ဆိုတဲ့ အဆိုးရွားဆုံးအကြံပြုချက်တွေ ရရှိတတ်ပါလိမ့် မယ်။ တကယ်တော့ အဲသလို ကျွန်တော်တို့ခံစားလေ့ရှိတဲ့အရာတွေဟာ အမြဲတမ်းမမှန်ကန်သလို၊အမြဲလည်းမှားတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူး။ ကျွန်တော် တို့ဘဝမှာ အမှတ်ရစရာတွေ၊ ဆေးဝါးမှီဝဲတဲ့အရာတွေရယ်၊ ခန်္ဓာကိုယ် ဖွဲ့စည်းမှု၊ စားတဲ့အစာ၊ အိပ်ရေးပျက်ခြင်း၊ ဖိအားခံနေရခြင်း သို့မဟုတ် ကြောက်ရွံ့မှုတွေ စသည်တွေအပေါ်မူတည်ပြီး စိတ်ခံစားမှုတွေဖြစ်လာ တတ်ပါတယ်။ စာရေးသူကျွန်တော့်ဘဝမှာ စိုးရိမ်စရာတွေကြုံလာပြီဆိုရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို…
ဘုရားသခင်က ခင်ဗျားကိုချစ်ကြောင်းကို သိမှတ်ဆင်နွှဲဖို့ခရစ်စမတ်
ကျမ်းစာထဲမှာ ဖေါ်ပြသမျှထဲက နာမည်အကြီးဆုံး စကားက၊ ဘုရားသခင်က ယေရှုကို ဘာကြောင့်လောကမှာ စေလွတ်သလဲဆိုတဲ့ အရာကို ရှင်းပြတဲ့ကျမ်းပိုဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီမှာ ယေရှုကဒီလို ရှင်းပြ ထားတယ်။ “ဘုရားသခင်၏သားတော်ကို ယုံကြည်သောသူ အပေါင်းတို့သည် ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်၊ ထာဝရ အသက်ကိုရစေခြင်းငှါ ဘုရားသခင်သည် မိမိ၌ တပါးတည်းသော သားတော်ကို စွန့်တော်မူသည့် တိုင်အောင် လောကီသားတို့ကို ချစ်တော်မူ၏” ရှင်ယောဟန်ခရစ္စဝင်ကျမ်း ၃း၁၆ ခရစ်စမတ်ဖြစ်လာရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းက ဘုရားသခင်ရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကြောင့်ပါ။ ဘုရားသခင်က ကျွန်တော်တို့အားလုံး၊ စာဖတ် သူအပါကို ချစ်လွန်းအားကြီးလို့ လောကကြီးမှာ လူ့ဇာတိခံပြီး ကြွလာ ပါတယ်။ အဲဒီအခါမှာ ကျွန်တော်တို့က သူ့ကိုလက်ခံ၊ သဘောပေါက်နိုင် ပြီး ပြန်လည်ချစ်နိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဓမ္မပညာရှင်၊ တွေးခေါ်ရှင်တွေကတော့ ဒါကို Incarnation လူ့ဇာတိခံယူခြင်းလို့သမုတ်ကြတယ်။ အကြောင်းရင်း…
ဤနေ့ရက်သည် ထာဝရဘုရားစီရင်တော်မူသော နေ့ရက် ဖြစ်၍ ယနေ့ဝမ်းမြောက် ရွှင်လန်းကြကုန်အံ့။ ဆာလံ ၁၁၈း၂၄ ခရစ်စမတ်နေ့ဟာ ပျော်ရွှင်ရမယ့်နေ့ရက်၊ ပွဲလမ်းသဘင်ပါ။ အထူးသဖြင့် ယေရှုခရစ်ရဲ့မွေးနေ့ပွဲတော်ပါ။ မွေးနေ့ပွဲဆိုတာဟာလည်း ကျင်းပရမယ့်နေ့ရက်မျိုးပါ။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့က “Merry Christmas” ရယ်လို့ဆိုကြတာရယ်။ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ခရစ်စမတ်ရယ်ပေါ့။ ဒါပေမယ့်လည်းပဲ။ များသောအားဖြင့် ခရစ်စမတ်နေ့ကို ကျင်းပ တဲ့အခါမှာ ဂုဏ်ပြုခံမွေးနေ့ရှင်ဖြစ်တဲ့ ယေရှုကို လုံးလုံးလျားလျား လျစ်လျူ ရှုခဲ့ကြပါတယ်။ တခါတလေ … သူ့နာမည်တောင် မဖေါ်ပြခဲ့ကြဘူး။ ပျော်စရာခရစ်စမတ်ရဲ့အကြောင်းရင်းဟာ ယေရှုခရစ်တော်ကြောင့်ပေမယ့် သူဟာ အမေ့ခံရင်ခံ။ တခါတလေကျတော့ ခရစ်စမတ်ဘိုးဘိုးတို့၊ ဆန်တာ ကလော့တို့နှင့် တန်းတူသဘောထားပြီး ပြောချင်ပြောကြတယ်။ ဖေါ်ပြ ကြတယ်။ စာရေးသူကျွန်တော့်အနေနှင့် ဒီစာအုပ်လေးကို ရေးသားတဲ့အခါ မှာ ခရစ်စမတ်ဈေးရောင်းသူအချို့နှင့်စကားပြောပြီး၊ သုတေသနလေးလုပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။…
ဘာကြောင့် ခရစ်စမတ်ဟာကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ ပေးကမ်းခြင်း ပွဲတော်ဖြစ်ရတာလဲ
ခပ်သိမ်းသောအမှုအရာတို့သည် မိမိတို့အချိန်ရှိ၏။ မိုဃ်းကောင်းကင်အောက်၌ ကြံစည်သမျှ အသီးသီး တို့ကို ပြုရသောအချိန်ရှိ၏။ ဒေသနာကျမ်း ၃း၁ တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ ဒီခရစ်စမတ်ပွဲဟာ အကြီးကျယ်အခမ်းနားဆုံး အဖြစ် နှစ်စဉ်ကျင်းပလေ့ရှိပါတယ်။ အခြားပွဲလမ်းသဘင်တွေ၊ ရုံးပိတ်ရက် တွေမှာ တရက်တလေသာရှိပေမယ့် ဒီခရစ်စမတ်မှာကျတော့ တစ်လလုံးလုံး စည်စည်ကားကားကျင်းပကြပါတယ်။ နှစ်တစ်နှစ်ရဲ့ ဆယ့်နှစ်ပုံတစ်ပုံ လောက်အထိ ယူလေ့ရှိပါတယ်။ ခရစ်စမတ်ရာသီမှာ လူတိုင်းလူတိုင်းက သူတို့ရဲ့နေ့စဉ်အလုပ်တွေကို ဘေးချိတ်ထားပြီး၊ အိမ်အလှတွေ ပြင်ဆင် ကြတယ်။ အချင်းချင်းနှုတ်ဆက်တဲ့ကဒ်လှလှလေးတွေ ပေးပို့ကြတယ်။ လက်ဆောင်တွေ၀ယ်ကြ၊ ပေးကြတယ်။ ခရစ်စမတ်ပါတီပွဲတွေတက်ရောက် ကြတယ်။ ဘုရား၀တ်ပြုသွားကြတယ်။ ခရစ်စမတ်သီချင်းတွေ သီဆိုကြ တယ်။ TV ကလာတဲ့ ခရစ်စမတ်အထူးအစီအစဉ်တွေ စောင့်ကြည့်ကြပါ တယ်။ မိသားစုနှင့် ဝေးကွာနေတဲ့သူတွေက မိသားစုဆီကို ပြန်လာ ကြတယ်။ ခရစ်စမတ်မြင်ကွင်းတွေ၊ အသံတွေ၊ သင်းရနံ့တွေက…
Please Like Click
P.O. Box 51682 Bowling Green KY 42102
© 2021 New Dream Media Ministry Inc. Built using WordPress and the Mesmerize Theme